Service - Hebei Baako Co., Ltd
Control System Tayada - Waxaan leenahay nidaam tayada dhamaystiran si loo hubiyo waxyaabaha our aad u qanciso looga baahan yahay. Nidaamkan soo socota oo ay gacanta ku Dabcan oo dhan wax soo saarka, ogaada khaladaad suurto gal ah iyo furfuraya mid ka mid ah dhibaatooyinka wakhtiga. Waxay hubisaa in link kasta oo silsilad soo saarka waafaqsaneyn baahida of bacaha dhammeeyey.
Imtixaanka Tayada iyo kormeerka - Waxaan sameeyo bacaha iyo xakameeyo tayada waafaqsan Heerka macaamiisha-baahan yahay ah. shaqaalaha xirfad Our lagu kalsoonaan karo tijaabin lahaa alaabta maalin kasta ee link kasta oo muhiim ah oo habka wax soo saarka iyo tijaabin bacaha dhammeeyayna ay si aad u qanciso baahida. Intaas waxaa sii dheer, oo dhan ee bacaha our codsan kartaa imtixaanada in shaybaar xirfadeed ee America, Europe iyo Australia marka aad codsato.
24 saacadood TAAGEERADA CHAT LIVE
Waxaan sii lahaa chat live maalintii oo dhan, si dhakhso ah u jawaabi doonaa in mid ka mid ah su'aalaha aad.
Waaxda Our Sales yabooho in ay jawaab 24 saac gudahood xitaa su'aasha ugu adag.
Waaxda Our Production si fiican u xallin doonaan su'aal kasta oo ay suuragal tahay farsamo ee bacaha wax soo saarka iyo sahayda si aad ku qanacsan in waqti wanaagsan.
Waaxda Our Operation siin doonaa talo faahfaahsan ee alaabta geeyey 24 saacadood gudahood oo si degdeg ah u degaan doonaa xal ku haboon in su'aalo la xiriira gaadiidka.